Kenya oo Dalbaneysa In laga Caawiyo Siideynta Dad laga Qafaashay – SBC
Kenya oo Dalbaneysa In laga Caawiyo Siideynta Dad laga Qafaashay
Posted by Webmaster on January 14, 2012 Comments
Masuuliyiinta Dowlada Kenya ee gobolka Waqooyi bari dalkaasi ayaa bilaabay xiriir ay la sameynayaan odayaasha dhaqanka ee Goboladaasi oo ku aadan in wax lagala qabto baadigoobka loogu jiro saraakiil Kenyan ah oo dhawaan laga soo qafaashay Degmada Wajeer.
Saraakiisha Dowlada Kenya ayaa sheegay in la waayay 7 qof oo ay ku jiraan sadex ka mid ah sarakiisha ciidamada Booliiska ee tuulada Gerrile oo u dhow Xuduuda Dalkaasi uu la wadaago wadanka Soomaaliya.
Madaxda Dowlada Kenya ayaa iminka ku howlan Sidii xiriir loola sameyn lahaa dowladaha Gobolka inay ka qeybqaataan howlgalka lagu soo furanayo dadkan oo lagu soo bandhigay deegaanada Koonfureed ee dalka oo ay gacanta ku hayaan Xarakada Alshabaab.
Sarkaalka Dhinaca Ciidamada U qaabilsan gobolka Waqooyi Bari ee Dalka Kenya Leo Nyongesa ayaa sheegay in wax yar oo horumar ah laga sameyay in la gaaro goobaha afduubka loogu haysto asxaabtooda.
Dowlada Kenya Ma heli weli xog buuxda oo ku aadan dadka laga soo qafaashay dagaalkii ka dhacay Tuulada Gerrile waxaana saraakiisha ciidamada Ay diideen inay sheegeen inay weerar qaadayan iyo in kale.
Dhinaca kale xarakada alshabaab oo shalay meel fagaare ah oo ku taala koonfurta soomaaliya ku soo bandhigay qaar ka mid ah dadka ka maqan Kenya aya ku hanjbaya inay sii wadi donan beegsiga ciidamada Kenya iyo xulafadooda dagaalka